नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : लोकतन्त्रले गर्दा काठमाडौंबाट सृजना म्यामलाई जस्तै बिराटनगरबाट अमरेन्द्र यादबजीलाई पनि चिन्न पाईयो !
लोकतन्त्रले गर्दा काठमाडौंबाट सृजना म्यामलाई जस्तै बिराटनगरबाट अमरेन्द्र यादबजीलाई पनि चिन्न पाईयो !
हेर्नुस, पुरुस प्रधान समाजमा धेरैजसो, पोई डाक्टर भएर - जोई डाक्टर्नी , पोई मास्टर भएर - जोई मास्टर्नी र पोई मेयर भएर - जोई मेयर्नी भएर बाँचिरहेका हुन्छ्न । जसै जसै चुनाब आउछ , तपाईले मन्त्राणी, हाकिम्नी, कम्रेड्नी भएर चुलो चौका सम्हाली रहेका र छोइला / कचिला बनाईरहेका , एकसे एक भाउजु र आमाहरु चिन्दै जानुहुन्छ । चुनाब , भाउजुहरुका निम्ति चुलाचौकाबाट बाहिर निस्किएर , काठमाडौंलाई सिंगापुर बनाउने अवसर हो भने , तपाईं हाम्रा निम्ति पनि "सृजनाहरु " चिन्ने एउटा राम्रो अवसर हो । यी मैले भर्खरै सिंह खान्दानीकी बुहारीचालाई चिन्ने अवसर पाए ।
सृजना , नै रहेछ यी महिलाको नाम पनि । सृजना सिंह । मैले , यी प्रकाशकी , यी सृजनाको नाम सुनेको रहेनछु । बरु मैले , माओवादी खान्दानाकी , प्रकाश कम्रेडकी माईली विधुवा
सृजना त्रीपाठी , उता पोखराकी उपमेयरमा सिफारिस हुँदा फ्याट्टै चिन्न सकेको थिए । तर, काँग्रेसी प्रकाशमानकी , आयुस्मती सृजना सिंह मेडमलाई चिनेको रहेनछु । जे होस, स्थानिय चुनाब आयो र म्यामलाई चिन्ने मौका पाईयो । नाईस टु नोईङ यु , म्याम !
हेर्नुस ! लालुकी लुगाई , रावडीदेवी यादबलाई संसारले चिनेजस्तै , तपाई हाम्रा रावडीहरुलाई पनि चिनिने र चुनिने अधिकार छ । तपाई हामीलाई पनि हाम्रा रावडीहरु चिन्ने अधिकार छ । लोकतन्त्रको एउटा सुन्दर पक्ष भनेकै यहि हो । राजतन्त्रमा यस्तो हुदैन । राजन्त्रमा तपाईले राजकुमार र राजकुमारीहरु जन्मिने बित्तिकै चिन्नुहुन्छ । तिनका फोटा घरमा सजाउनु हुन्छ । तर , लोकतन्त्र्मा , तपाईले चुनाब आएपछि मात्रै , बडामहारानी , अधिराजकुमार , अधिराजकुमारीहरुलाई चिन्नु हुन्छ । त्यसैले त भनेको, लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै यहि हो ।
लोकतन्त्रले गर्दा काठमाडौंबाट सृजना म्यामलाई जस्तै बिराटनगरबाट अमरेन्द्र यादबजीलाई पनि चिन्न पाईयो । नाईस टु नोईङ यु ब्रो !